HFA စီးရီး Pleated အမြင့် Flow Filter ကိုကျည်တောင့်
ဖော်ပြချက် polypropylene ၏ကြီးမားသောအချင်းကြယ်ဒီဇိုင်း filtration ထိရောက်မှု 99% ထက်မကျော်လွန်သည့်အခါမွငျ့မားစီးဆင်းမှု filter ကိုကျည်တောင့်မျက်နှာပြင် filtration ဧရိယာ, filter ကိုကျည်တောင့်များ၏ပမာဏကယ်ဖို့မြင့်မားသောဖုန်ကိုင်ပြီးစွမ်းရည်မြင့်မားစီးဆင်းမှုနှုန်းကိုကျယ်စေ pleated ။ မြင့်မားတဲ့စီးဆင်းမှု filter ကိုကျည်တောင့်ဓာတု compatibility နှင့် applications များ၏ကျယ်ပြန့်, ro အမြှေးပါးကိုကာကွယ်ပေးရန်စက်မှုမြင့်မားတဲ့စီးဆင်းမှုရေ filtration စနစ်အများအတွက်စံပြ option ကိုဖြစ်ကြသည်။ မြင့်မားတဲ့စီးဆင်းမှု filter ကိုကျည်တောင့်အလွှာ filter ကို function ကိုပေး 2. အပြင်ခက်လှောင်အိမ် 3. အမြင့်စီးဆင်းမှု filter ကိုကျည်တောင့်အဆင့်မြင့် filtration ထိရောက်မှုရှိပါတယ်ပျော့ခွငျထောဖွငျ့ကနျြး Ultipleat မြင့်မားတဲ့စီးဆင်းမှု filter များထက်ပိုမိုမြင့်မားပေါင်ချိန်ခံနိုင်၏အင်္ဂါရပ် 1. Gradient ပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံ, နိမ့်စွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းစရိတ်နှင့် အမြင့်စီးဆင်းမှု filter ကိုကျည်တောင့်များ၏အမြင့်ဆုံးစီးဆင်းမှုနှုန်း (99.98% ထိရောက်မှု) rated 110 M3 / H ကိုနှင့် Beta 5000 ရနိုင် 5. ပိုပြီးချွေတာအမြင့်စီးဆင်းမှု filter ကိုကျည်တောင့်ပြင်ပ filtration ပုံစံမှအတွင်းပိုင်း 4. အားလုံးအညစ်အကြေးကိုင်ပြီးသေချာသည့် pleated မီဒီယာအတွင်း၌နေထိုင်ရန်6။ အဆိုပါ filtration system ကိုနေရာလျော့ချရေးအများဆုံး 50% နှင့်အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များလာသောအခါအသုံးပြုမှုမြင့်မားစီးဆင်းမှု filter ကိုကျည်တောင့် 7. ပစ္စည်းများတွေ့ကြံ FDA ကလိုအပ်ချက်, ကျယ်ပြန့်ဓာတု compatibility ကိုမျှ resins, Binder, ဒါမှမဟုတ်ကော်နှင့်လျှောက်လွှာ 1.Paints နှင့်ကုတ်အင်္ကျီ2စမ်းသပ် 100% သမာဓိရှိ ။ Microelectronic, ပါဝါမျိုးဆက် 4. ro အကြို filtration နှင့်ပင်လယ်ရေ desalination 5. အရည်, API ကိုနှင့်ရေ filtratio အတွက်ရုပ်ရှင်နဲ့စေး 3. ရေကုသမှု ဎဇီဝလယ်ပြင်၌6ရေ, မြင့်သော fructose, စားသုံးဆီရေနံ, အချိုရည်များနှင့်နို့ယူဂိုဆလားဗီးယား
1 - 10 Total 626 (63 pages)